जमेको कानेगुजीलाई निकाल्न चाहानुहुन्छ ? यो विधि अपनाउनुहोस सुन्ने शक्ति बढ्छ दुई गुण ! – Sandesh Press
September 7, 2021 371
शरीरको साथसाथै, कान सफा गर्नु पनि धेरै महत्त्वपूर्ण छ। मानिसहरू प्राय जसो आफ्नो शरीर सफा गर्दछन् तर कान सफा गर्न बिर्सन्छन्। कान सफा नगर्दा, कुनै पनि व्यक्तिलाई विभिन्न प्रकारका समस्याहरूको सामना गर्नुपर्दछ।
कान सफा नगर्दा ठूलो रोगलाई निम्त्याउन सक्छ। यदि तपाईंले कान सफा गर्नुहुन्न भने, त्यसपछि आन्तरिक फोहोर जम्मा भई एक दिन कान दुख्ने समस्या आइपर्छ।
यसले कान संक्रमणको खतरा पनि छ। अधिक फोहोरका कारण, हामीलाई सुन्न पनि गाह्रो हुन्छ र कहिलेकाँही असहनीय पीडा महसुस हुन्छ। यदि तपाईले लामो समय सम्म आफ्नो कान सफा गर्नु भएन भने कान दुख्न थाल्छ, साथै कम सुनाइदिन्छ पनि ।
त्यसैले आज हामी तपाईलाई आफ्नो कान सफा गर्ने सजिलो घरेलु उपचारहरुको बारेमा बताउँछौं। यी विधिहरू प्रयोग गरेर धेरै पैसा खर्च नगरी तपाईं आफ्ना कानहरू सफा गर्न सक्नुहुनेछ ।
पहिलो तरिका-पहिले आधा कप तातो पानी लिनुहोस् र यसमा एक सानो चम्चा नुन मिक्स गर्नुहोस्। त्यसपछि यसमा कपासको एउटा टुक्रा भिजाउनुहोस् र त्यस कपासको माध्यमबाट कपासमा भिजाएको पानीलाई कानमा निर्चोनुहोस् । ध्यान दिनुहोस् कि कि पानी राम्रोसँग भित्र जानुपर्दछ। त्यस पछि, कान फर्काउनुहस् र कानबाट सबै पानी निकाल्नुहोस्।
दोस्रो-कानको फोहोर पनि बच्चाको तेलको सहायताले हटाउन सकिन्छ। यसका लागि, तपाईंले आफ्नो कानमा बेबि तेलको केही थोपा हाल्नुहोस् र कपास कपास लगाउनुहोस्। यसले छोटो समयमा तपाईको कानमा जमेको गरिएको कानेगुजीलाई नरम पार्दछ, ताकि कानेगुजी सजीलै बाहिर आउँदछ।
तेस्रो तरीका-समान मात्रामा हाइड्रोजन प्याराअक्साइड र केही थोपा पानी लिनुहोस् र कानमा राख्नुहोस्। जब यो कानमा राम्रोसँग जान्छ, केहि समय यसलाई छोडे पछि, कानलाई र्फकाउनुहोस् ताकि पानी बाहिर आओस्।
चौथो तरिका-कानको फोहोर पनि जैतुनको तेलले हटाउन सकिन्छ। यसको लागि, तपाईंले रातमा कानमा जैतून तेलको केही थोपा हाल्नुहोस्। करीव ३ देखि ४ दिन सम्म यो गर्नाले कानको कानेगुजी नरम हुनेछ र कानेगुजी सजीलै बाहिर आउँनेछ।
Prevयस्ता मानिसमा हुन्छ राजयोग, तपाईमा पनि छ की ?
Nextपब्जी खेल्दाखेल्दै अचानक जोडले चिच्याएपछि १८ वर्षीय दीपकको गयाे ठाउकाे ठाउ ज्यान
बिहानी पख यस्तो सपना देख्नु भयो ? मिल्नेछ सुखैसुख